Ghagharịrị ederede na-ekpuchi ya China Manufacturer
Nkọwa:Okwunye Akwụsị Mkpịrịgwụ,Mpaghara Galin na-agbagharị Galvanized Ọnụ Ụzọ,Oghere dị na ntanetị
Home > Ngwaahịa > Na-aga n&#39;ihu n&#39;Ọnụ Ụzọ > Ụlọ Ọrụ Mmebe Ụlọ Ọrụ > Ghagharịrị ederede na-ekpuchi ya
Ihe Nlereanya.: GR-06
Ebe a na-agbagharị ụgbọala na Hongfa Ike dị elu, ngwa ngwa, akara dị mma, obere ọrụ nchịkwa, ụda mkpọtụ, njirimara dị iche iche nke onye ọrụ maka windo nhọrọ n'ime ime ụlọ maka mfe na & out ngwaọrụ nchebe na EC akwụkwọ.
Ntuziaka nke ngalaba ụzọ
1.Babatara ejiji ngwa ngwa eji ejiji eji eji ulo oru mmeputa ulo ndi ozo.
2. Ogwe nchebe na-edozi onwe ya, ọfụma efu CFC n'efu, enyi na gburugburu ebe obibi.
3.Density bụ karịa 40kgs / m3, ọtụtụ ọka siri ike na osisi ọka dị,
ezi ike ịka nká na ike ihu igwe.
4.Nwe iwu nke okpukpu atọ, ihe mgbagwoju anya na akara ikuku dị n'etiti ngalaba, na ịme mkpuchi polyurethane dị elu.
6. Ngwaọrụ nchebe na-arụ ọrụ.
7. Ịgba mbọ ịme ihe.
Okwunye Akwụsị Mkpịrịgwụ Mpaghara Galin na-agbagharị Galvanized Ọnụ Ụzọ Oghere dị na ntanetị Akwụsị Akpaka Na-agbapụ Ụzọ Okporo ụzọ kpoo ọnụ Owu akwụkwọ nkwụnye ụgwọ nke onwe gị Akpaaka Akpaaka Akwụsị Ụlọ Nwepu nkwụsị na-arụ ọrụ onwe onye